HAFT KOMPUTEROWY P&M → Akanjo fanaovana doka • Akanjo miasa
Embily vita amin'ny solosaina vokariny
Jereo ny tolotra omenao
Fantaro ny vokatrao
Izahay dia orinasa Poloney misy fomban-drazana, mpamokatra sy mpizara
asa avo lenta sy akanjo fanaovana dokambarotra.
Efitrano fanjairana manokana
- ny famokarana mety hitranga
Manana efitrano fanjairana manokana izahay - manjaitra tsara mifanaraka amin'ny antenainao. Ny fahafahantsika manodina dia mamela antsika hamokatra entana an'arivony isam-bolana.
entana vita isam-bolana
sy fanaterana eo am-baravaranao.
Ny baiko rehetra no avadika haingana, amin'ny daty efa voatondro mialoha, alefanay amin'ny alàlan'ny iraka na any amin'ny mpanidy parcel ianao mba hahatratrany anao haingana.
P&M - efitrano fanjairana amboradara amin'ny solosaina
P&M dia efitrano fanjairana poloney miasa ao Rawa Mazowiecka hatramin'ny 1995. Manolotra serivisy fanjairana, fanapahana, fanoratana ary fanoratana izahay.
Izahay dia manokana amin'ny baraingo amin'ny solosaina amin'ny promosialy sy ny akanjo fitafy.
Ny tolotra omenao dia miantefa amin'ny orinasa sy ny mpivarotra. Raha liana mividy amin'ny singa iray ianao, tsidiho azafady fivarotana an-tserasera.
P&M dia vita amin'ny olona. Tena matihanina mahay sy za-draharaha izy ireo izay ho faly hanome anao torohevitra sy fanampiana amin'ny fisafidianana ny teknika sy ny endrika tsara indrindra mba hahitana miavaka ny vokatrao.
P&M - fitaovana sy azo atao
Ny efitrano fanjairana P&M dia manana fitaovana maoderina ahafahany mameno na dia ny zavatra andrasana avo indrindra amin'ny mpanjifa aza.
Ahitana ny valan-javaboary misy antsika, anisan'izany: milina fanalahidy, fanjaitra roa, renderki, overlocks, binder, milina pasketing, milina vita amin'ny mason-tany, milina famonosana, milina fanoratana, latabatra vy.
Vonona ny hanatanteraka ny baikonao izahay. Manasa anao izahay hiara-miasa.
Paweł Kubiak - tompon'ny orinasa
Fantaro ny herintsika
Hihaona amin'ny orinasantsika
Zaridaina maoderina maoderina
Ny kalitao avo indrindra avo lenta
Traikefa fanjaitra matevina
Faly izahay mizara fahalalana ary manome torohevitra
Ao amin'ny pejin'ny bilaoginay no ahitanao ny mombamomba ny fanoloranay sy ireo torohevitra sarobidy maro momba ny fironana amin'ny indostria.
Jereo ny fidirana misimisy kokoa
Fanontana DTG - ny mety fanontana avy amin'ny sombin-javatra DTG fanontana dia iray amin'ireo fomba vaovao fanamarihana ...
T-shirt misy pirinty amin'ny solosaina maoderina no ampiasaina handravahana karazana lamba isan-karazany ...